I-WOWOW Wall Mounted Pot Filler Ku-Brushed Nickel - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Embizeni Filler Ikhishi ompompi / I-WOWOW Wall Wall Pot Filler Egcwalisiwe ku-Nickel
Ngenxa yomklamo wayo we-ergonomic, udonga olufakwe ebhodweni lokugcwalisa izimbotshana luyintofontofo ukulisebenzisa.
Izinto zayo zensimbi ezingenasisekelo eziphezulu zenza ihlale isikhathi eside.
Lo mkhiqizo unikeza umpheki ngokusekelwa okuthembekile.
2311300 imiyalo yokufaka
Isiketheni esenziwe nge-nickel pot filler faucet 2311300
Ufuna ezinye izinto ezikhethekile ekubumbeni kwekhishi lakho elisha ukwenza ikhishi lakho lisebenze futhi lihle ngasikhathi sinye? Lapho-ke le faucet ye-nickel pot filler faucet ingaba yinto yakho. Ingabe ngezinye izikhathi ubhekene nobunzima bokuthwala izimbiza ezinkulu zamanzi ukusuka ekhishini lakho ukuzula esitofini sakho? Lokhu kungaphatheki kahle kungokwedlule ngemuva kwalesi isikejana se-nickel pot filler faucet yeWOWOW. Imishini yokufudumeza izimbiza ngokuvamile ifakwa ngemuva kwesitofu sakho sasekhishini ukuze kuxhumeke amanzi eduze kwendawo yakho yokupheka. Lokhu kuyasiza ikakhulukazi lapho kufanele ugcwalise izimbiza ezinkulu ngamanzi ukubilisa. Akudingeki uhambise izimbiza futhi ezingasinda kalula ama-ounces amaningi. Ikakhulu uma ungafuni ukukhipha izingalo noma izihlakala, lokhu kungaba yisixazululo esisebenzayo senduduzo yakho yasekhishini.
Omunye umphumela omnandi wesikebhe se-pick filler faucet yeWOWOW iqiniso lokuthi ungahlanza isitofu sakho sasekhishini kalula, ngoba uxhumano lwamanzi luseduze. Ukuhlanza kulula kakhulu nge faucet yebhodwe lokubhaka. Isikhiphi sokufafaza se-nickel pot filler seWWOW sifakwe ngama-valves e-ceramic amabili ukuze kuqinisekiswe isipiliyoni sokuvuza. Uma elinye lama-valve lalihlala livulekile, lokhu bekungeke kubangele ukuvuza okukhona. Ngakho-ke kunconywa njalo ukucisha ama-valve womabili ukuze uqiniseke ukuthi isitofu sakho sasekhishini sihlala somile ngaso sonke isikhathi. Kungcono uphephe kunokuba uxole!
Isikhuhlu sanamuhla se-nickel pot filler faucet
Le faucet eyodwa ye-nickel pot filler faucet yeWOWOW inombono wanamuhla. Ngokuqinisekile kunikeza ukuthinta okhethekile, okukhanyayo ekhishini lakho ngaphandle kokubaluleka kwalo okungeziwe. Njengoba izimbiza zokubumba imbiza zingaziwa kakhulu, abantu abaningi bangakubuza ngalokhu lapho bebona ikhishi lakho. Amaphoyinti amancane agxile kakhulu ekhishini yibo abaphethe izikebhe. Lokhu kusho ukuthi abantu banakwa ngokwemvelo emafofini ekhishini lapho bebheka ekhishini lakho. Le faucet yepayipi le-nickel pot filler ifanela kahle kunoma yiliphi ikhishi lesimanje lasekhishini, futhi nakanjani idonse ukunakwa okukhethekile.
Isikhipi se-nickel pot filler faucet yeWOWOW ingahlanganiswa kalula namanye amafektri wasekhishini wanamuhla ukwakha ubumbano obunobunye ekhishini lakho lokuhlobisa. Imigqa yesikwele ehlanganiswe nobunjwa obuyindilinga yakha umbukwane odlalayo. Abaklami be-WOWOW baqashelwa emhlabeni wonke njengokwenza imidwebo ebukhali kakhulu engashicilelwa kalula kunoma yiliphi iphephabhuku le-top-notch mayelana nemiklamo yasekhishini yokunethezeka.
Finyelela isikebhe sokufafaza se-nickel pot filler
Ubukhulu befenisi yokugcwalisa imbiza ukuthi ungayifaka eceleni kodonga eduze kwesitofu sakho. Ingagcinwa kalula ngasodongeni ngenxa yokuhlangana okuhlanganayo okubili. Ngale ndlela ayihluphi indawo yakho yokupheka njengoba isula indawo yokupheka. Kepha uzoba nokufinyelela okuhlaba umxhwele cishe cishe ama-intshi angama-24 ukuze ugcwalise noma yiliphi ibhodwe kunoma yimuphi umgodi wesitofu. Isikhiphi se-pot filler singandiswa kalula lapho usidinga ngempela, futhi usikhipha ngokushesha lapho usuqedile. Uma usufake lesi isikebhe sokugcina se-nickel pot filler, uzozisola ngokuthi awukayifakanga le nto yokusebenza ngaphambili.
Amanzi futhi ahamba kahle nge-aerator esezingeni eliphakeme yeNeoperl ABS. Ukuhlinzeka nge-anti-splatter kanye nesipiliyoni sokuvuza kwamanzi sama-leak. Ukugcwalisa izimbiza zakho esitofini sakho sokupheka ngamandla agcwele amanzi ngeke kubangele ukuchitheka. Ukuchitha amanzi kungadalela izimo eziyingozi, ikakhulukazi uma upheka kwamanye umgodi wesitofu wasekhishini lakho. Isitofu sakho sokupheka sihlala sigciniwe ngaso sonke isikhathi, futhi ungasisebenzisa uma imigodi yomlilo ivulekile, ngaphandle kokubanga ingozi ekhishini lakho.
Ikhwalithi yokuphrinta ye-nickel pot filler
Ama-valves amabili alo faucet we-nickel pot filler faucet enziwe ngezinto ezenziwe ngobumba, futhi aqinisekisa ukuphenduka okubushelelezi. Uqaphela ukuthi ama-valve awabangeli ukubuyela emuva nhlobo futhi akukho kungqubuzana. Ngenxa yalokho uqinisekiswa ngokusebenza okubushelelezi. Noma unamajoyinti asontekenteke, lesi isikulufu sokufafaza sembiza esine-nickel singasebenza kalula. Ngenxa yomklamo wayo we-ergonomic, udonga olufakwa emafayilini angenazimbiza ukhululekile kakhulu ukulusebenzisa. Izingalo zombili eziguqukayo ezingama-360 degrees zibushelelezi ukusebenza futhi.
Izinto zayo zensimbi ezingenasisekelo eziphezulu zenza ukuthi lesi isikebhe sebhodwe le-nickel pot filler siqine kakhulu. Ingaphezulu le-nickel le-brunch faucet alikho kuphela elingelichwe futhi alonakalisi. Izixhumi zenziwe ngethusi eliqinile, eliqinisekisa ukuhamba kwamanzi okunempilo ngaphandle kokusala kwensimbi kuyo. Isixazululo esihle kakhulu sempilo yakho nomndeni wakho. Ngenxa yekhwalithi, lesi isikejana esihlanganisiwe se-nickel pot filler sivame ukusetshenziswa ezindaweni zokuthengisela izindawo zokudlela kanye.
Isiqinisekiso sokufafaza i-nickel pot filler faucet
Isikhiphi esenziwe nge-nickel pot filler faucet size nekhithi yokufaka ephelele. Ngale kit yokufaka ungafaka kalula isikulufa sokufafaza se-nickel pot brler ngokwakho ngaphandle kwezinkinga. Lokhu kuzokusindisa izindleko zamapayipi abizayo. Ikhithi yokufaka iza nayo yonke impahla oyidingayo ukuze unamathisele isikejana sokugcwalisa sobumba esibekwe odongeni. Kubandakanya i-wlen wrench, Teflon tape, namagilavu ​​wokufaka ukuze ungalimazi izandla zakho nokuzigcina zihlanzekile lapho kufakwa. Ngakho-ke siyakuqinisekisa ukuthi ungasifaka lesi isikebhe sokuphehla sembiza esine-nickel potmer engakapheli ihora. Yebo, kuphela uma unephoyinti lamanzi endaweni efanele.
Njengoba i-WOWOW iqiniseka ngekhwalithi yepayipi lokugcwalisa ibhodlela le-nickel, ikunikeza isikhathi sewaranti seminyaka emihlanu. Njengoba i-WOWOW inikeza inani elingcono lemali ongalithola, futhi ikunikeza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-5. Ngakho-ke awunabungozi nhlobo. Uma ungeke uqiniseke ngale mpompi yokugcwalisa ibhodlela le-nickel ebhrashi, umane uthole imbuyiselo ephelele. I-WOWOW imele umkhiqizo wayo nokuthi ungayibona ngokushesha.
Izinzuzo zompompi wokugcwalisa ibhodlela le-nickel obhulashiwe ngamafuphi:
Ukugcwaliswa kwembiza yanamuhla
Amajoyini wekhwalithi nama-valve
Kuphephile kakhulu ukusebenzisa
Kulula ukufaka ngemizuzu engu-30
I-SKU: 2311300 Categories: Ikhishi Faucets, Embizeni Filler Ikhishi ompompi Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Ibhodlela lokugcwalisa, I-single Lever
13.56 x 7.24 x amasentimitha angu-1.42
360 Degree Ukuzungelezisa, Joint Double, amaseviyethi